‘भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि पदबाट राजिनामा दिन्न’ – कंशाकार ( महाप्रबन्धक ने.वा.से.नि. ) « Niatra TV
‘भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि पदबाट राजिनामा दिन्न’ – कंशाकार ( महाप्रबन्धक ने.वा.से.नि. )
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महाप्रबन्धक कंशकारले भने,‘यो त प्राविधिक विषय हो । शेरबहादुरजी र बाबुरामजीले किन कुरा उठाउनुभयो ? मलाई आश्चर्य लागेको छ । म यो विषयमा भेटेरै देउवाजीसँग कुरा गर्छु । कसरी बोल्नुभयो ?’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वाईडबडी खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया नियम, कानुनअनुसार नै रहेको भनेर फैसला गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नियम र ऐनअनुसार नै जहाज खरिद भएको हो भनेर २०७४ मंसिरमा निर्णय गरिसकेको छ ।’